Waa maxay sababta Minnetonka? | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
In ilmahaaga laga diiwaangeliyo degmo dugsiyeed waa mid muhiim u ah qoys kasta. Haddii aad ilmahaaga koowaad ka diiwaangelineyso Xannaanada , ama aad u wareejineyso qoys dhan waddanka oo dhan, waxaan isku dayi doonnaa inaan hubinno in hawshu ay u fududahay sida ugu macquulsan. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sahamiso degelkan si aad wax badan uga ogaato waxa dugsiyadeennu bixiyaan iyo sida ikhtiyaarradeena waxbarasho ee hal-abuurka leh ay ugu habboon yihiin baahiyaha qoyskaaga.
Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waa degmo taasi waa oo diiradda lagu saaray heer caalami, heer sare oo ilmo-xuddun u ah carruurnimada hore, waxbarashada dugsiga hoose iyo sare. Canug walba waa mid u gaar ah sida waalid kasta rajadiisa iyo riyadiisa, iskuuladeena isku midka ah ee aadka u fiican waxay bixiyaan barnaamijyo gaar ah oo loogu talagalay inay taageeraan baahida waxbarasho iyo danaha ilmo kasta. Iskuulada adag waxay muhiim u yihiin bulshada xoog leh iyo u adeegida wanaagga waa qeyb muhiim u ah himiladeena.
Degmadeena ayaa caan ku ah cilmiga tacliinta, heer sare xagga farshaxanka, ciyaaraha fudud ee waxqabadka iyo dabacsanaanta ardayda iyo qoysaskooda. Waxaad arki kartaa nuqul ka mid ah Warbixinteena Sannadlaha ah si aad wax badan uga baratid.
Ku Saabsan Bulshadeena
Guulaha La Taaban Karo Ee Heerarka Oo Dhan
Kulliyad cusub oo ku hawlan
Dugsiga Dadweynaha ee Minnetonka wuxuu ka mid yahay degmooyinka ugu waxqabadka wanaagsan dugsiyada Minnesota iyo waddanka. Degmadeenu waxay si sharaf leh ugu adeegtaa qoysaska dhammaan ama qayb ka mid ah 10 beelood: Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Tonka Bay, Victoria iyo Woodland.
Banaanka degmadeena? Dhib malahan! Ardayda ka socota 45 degmo dugsiyeedka kale ee Minnesota waxay xaadiraan dugsiyada Minnetonka iyagoo maraya barnaamijka Diiwaangelinta Furan ee gobolka.
Gobolka quruxda badan ee Lake Minnetonka, oo qiyaastii 15 mayl galbeed kaga toosan Minneapolis, waxaa markii ugu horreysay dejiyay Dakota iyo Hindida Ojibwe. Aaggu wuxuu u furmay dejin 1851 iyo 1854 ku dhowaad dhammaan harada badda ayaa la sheegtey. Sannadkaas, aqalka dugsiga 20ˈ x 24ˈ ayaa lagu soo dhoweeyay 10-kiisa arday ee ugu horreeyay, taas oo calaamad hore u ah xasilloonida bulshada ee "Big Woods." Dugsiga Hoose ee 'Minnetonka' ee 'Groveland Elementary' waa hadda midka ugu da'da weyn dugsiga hoose ee Minnesota. Degmada Dugsiga Dadweynaha Minnetonka waxaa la abaabulay sanadkii 1949, iyadoo la isku daray lix degmo oo yaryar, waxaana la furay dugsiga sare ee Minnetonka sanadkii 1952.
Degmadu waxay hadda u adeegtaa in ka badan 10,900 oo arday iyo 10 bulsho - Minnetonka , Chanhassen , Deephaven , Eden Prairie , Excelsior , Greenwood , Shorewood , Tonka Bay , Victoria iyo Woodland —oo ay ku jiraan dugsi-horaad, lix dugsi hoose, laba dugsi dhexe iyo hal dugsi sare. Minnetonka ayaa ah tan ugu baahida badan gobolka ee loogu talagalay diiwaangelinta furan, iyada oo in ka badan 3,600 ardayda aan madaxweynaha ahayn.
Bulshooyinkeenu waxay leeyihiin jawi deggan oo shaqsiyeed. Qoysaska doortay inay ku dhex noolaadaan beesheena waxay qiimo weyn ku fadhiyaan qoyska, waxbarashada, caqiidada iyo bulshada. Waalidiintu waxay si aad ah ugu lug leeyihiin nolosha carruurtooda, taasoo ka dhigaysa inay si fudud ku bartaan qoysaska kale.
Tayada nolosha iyo u heellanaanta qoysaska iyo dhalinyarada
Dugsiyo tayo sare leh ayaa soo jiita qoysaska aagga
Xaafado yar yar oo la garan karo, dabaaldegyo dadweyne, waxqabadyo la wadaago, farshaxanka iyo kaqeybgalka bulshada ayaa kordhiya dareenka deganaanshaha dadka deegaanka
Dadku waxay ku negaadaan aagga, iyagoo siinaya joogtayn iyo aqoon ka caawisa carruurta inay horumar gaaraan
Waqtiyada firaaqadu waxay ku badan yihiin doomaha, kalluumeysiga, dabaasha, barafka isboortiga iyo waxyaabo kale oo badan. Qoysasku waxay sameeyaan inta ugu badan jardiinooyinka xaafadaha, xeebta dabaasha iyo jidadka gobolka ee isku fidiya masaafo dhan.
Goobaha wax ku oolka ah ee ku habboon dukaamaysiga, munaasabadaha waaweyn ee isboorti ee horyaalada iyo fursadaha dhaqameed ee aagga metrooga magaalooyinka mataanaha ah ayaa masaafo gaaban u jira.
Beesha Lake Minnetonka
Lake Minnetonka majaladda
Rugta Ganacsiga ee Excelsior-Lake Minnetonka
Excelsior-Lake Minnetonka Taariikhda Bulshada
Saddex Degmo Park Park
Dhacdooyinka caanka ah
Firecracker Run (Luulyo 4)
Tour de Tonka (Sabtida koowaad ee Agoosto)
Ku guuleysiga ardayga ee Minnetonka ayaa ah mid abid abid sareeya oo ka mid ah kuwa ugu fiican qaranka.
Aasaaska waxbarashadu wuxuu bilaabmaa bilowga dugsiga xannaanada iyo dugsiga hoose (fasallada K-5). Ardaydeena badankood waxay kasbadaan in kabadan halsano kobaca tacliimeed sanad gudihiis. Celceliskeenna fasalka 5aad waa lix heer fasal oo xagga akhriska iyo xisaabta ah marka la barbar dhigo xeerarka qaranka.
Labadeena dugsi dhexe (fasalka 6aad-8aad) waxay bixiyaan dabacsanaan iyo taageero ardayda si loo ogaado hibooyinka iyo sahaminta danaha. Degmooyinka galbeedka metro school, ardaydeena waxay kuqortaan # 1 xaga aqriska, # 2 sayniska iyo sadexda ugu sareysa xisaabta imtixaanada gobolka. Guusha waxay ka baxsantahay tacliinta: In ka badan 80% ardayda dugsiga dhexe waxay ku lug leeyihiin ugu yaraan hal nashaadaad dugsiga ka dib, kobcinta caafimaad bulsho-shucuur caafimaad qaba.
Dugsiga Sare ee Minnetonka (fasalka 9aad-12aad) ayaa ka mid noqday dugsiyada sare ee ugu wanaagsan Ameerika. Halkan, ardaydu waxay ku kobcaan kuna koraan jawi waxbarasho oo aamin ah oo wax ku ool ah, kuna fiicnaada tacliinta, waxqabadyada, farshaxanka iyo ciyaaraha fudud. Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu ka qalin jabiyay boqolkiiba 99 ardaydiisa halka 90 boqolkiiba ay ku xiran yihiin kuleejka. Fasalka 2018 wuxuu soo daabacay celcelis ahaan dhibcaha ACT ee 27.7, iyadoo laba iyo toban arday ay kasbadeen dhibco sare 36. 79% waxay qaateen hal ama in ka badan Meelaynta Horukacsan (AP) ama International Baccalaureate (IB) fasallo intii ay ku jireen xirfaddooda dugsiga sare.
Kulliyadeenu waxay leeyihiin jacayl dhab ah oo loogu talagalay carruurta iyo waxbarashada. Waxay yaqaanaan sida loo sameeyo isku xirnaan muhiim ah oo shidi doonta dhimbiil iyo jacaylka waxbarashada ilmahaaga. 99% waalidiintu waxay ku qiimeeyaan waxbarashada ay bixiyaan Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka mid heer sare ah ama wanaagsan.
Marka laga gudbo akhriska, qorista iyo xisaabta, waxaan kobcineynaa iskaashi, xiriir, feker xasaasi ah, hal-abuur, barasho caalami ah, habsami u socodka tikniyoolajiyadda iyo waayaha dunida dhabta ah. Waxay u qaabilaan teknolojiyadda sidii dardar-gelin wax-barasho, laga bilaabo manhaj sireed ilaa aalado casri ah oo ka dhigaya ilaha fasalka mid ku habboon oo casriyeysan. Macallimiinta Minnetonka waxay si fiican u yaqaanaan fikirka naqshadaynta iyo mashruuc ku saleysan, waxbarasho shaqsiyeed oo u diyaarin doonta ilmo kasta mustaqbal la qiyaasi karo oo keliya.
Minnetonka waa degmada kaliya ee ku taal aaga metro ee cimilada dhaqaale hoos u dhigey iyada oo aan miisaaniyada la jarin ilaa 2005. Waxaan ka mid nahay kaliya 70 dugsi degmo oo dalka oo dhan ah oo leh Moody's Aaa Bond rating — qiimeynta ugu sareysa ee suurtogalka ah. Sannadkii 2015, beesheena ayaa ansixisay laba afti oo maalgelin ah oo bixisay dakhliga hawlgalka iyo maalgelinta tiknoolajiyada gaarka ah illaa 2025—72% ee codbixiyayaashu waxay taageereen maalgelinta, 92% ka mid ah waalidiintuna waxay ku kalsoon yihiin hoggaamiyeyaasha degmadu inay sameeyaan waxa ku habboon carruurta.
99% waalidiintu waxay ku qiimeeyaan waxbarashada ay bixiso Dugsiga Degmada Minnetonka mid heer sare ah ama wanaagsan.
94% waalidiintu waxay noo sheegaan in bulshadeenu kaheleyso qiime wanaagsan maalgashiga ay ku sameysay iskuulada dowlada ee deegaanka.
93% qalinjabiyeyaasheena 2019 waa kuleej kulliyad.
27.7 wuxuu ahaa celceliska dhibcaha ACT ee fasalka 2019.
Abaalmarinta 'AP' ee 'Honor Roll' ee loogu talagalay helitaanka kordhinta koorsooyinka meelaynta ee horumarsan.
Dugsiga Sare ee Minnetonka waa International Baccalaureate (IB) World School.
Waxay kuxirantahay degmo dugsi sare ee Minnesota by niche.com.
Abaalmarinta Barnaamijka Abaalmarinta Apple ee barnaamijkayaga 1: 1 iPad.
NAMM waxaa lagu sharfay dadaal aan caadi aheyn oo sare iyo helitaanka waxbarashada muusikada.
Waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad qaaddo tallaabada xigta adigoo gujinaya badhannada hoose ama la xiriir xafiiskayaga diiwaangelinta.
Guriga aad ka fiirsaneyso ma ku yaal xudduudaha Dugsiga Minnetonka ee Degmada?
Gali cinwaanka Khariidada Degmooyinka si loo xaqiijiyo degmada loona qoondeeyey dugsiyada hoose, dhexe iyo sare.